သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းက အိမ်သာထိုင်ခွက်ထက် ၇ ဆပိုပြီး ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား..? by popolay.com
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းက အိမ်သာထိုင်ခွက်ထက် ၇ ဆပိုပြီး ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား..?
03 Dec 2018 13,628 Views
အချိန်တိုင်းလိုလို ကိုယ်နဲ့မကွာ သင့်အနားမှာအမြဲရှိနေတဲ့ လက်ကိုင်စမတ်ဖုန်းက ဘိုထိုင်အိမ်သာ ဖင်ထိုင်ခွက်ထက် ၇ ဆကနေ ၁၇ ဆထိပိုပြီး ညစ်ပတ် ရွံစရာကောင်းကြောင်း သုတေသနပညာရှင်များက စစ်တမ်းများအရ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ တစ်ချိန်လုံး လက်နဲ့ အပွတ်ခံနေရသလို တစ်ခါတစ်ရံ အောက်ပြုတ်ကျတာ၊ အိမ်သာထဲထိယူသွားပြီး ဖုန်းသုံးတာ စသည်ဖြင့် အခြေအနေတို့ကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် စမတ်ဖုန်း အများစုဟာ အိမ်သာထိုင်ခွက်ထက် ၇ ဆပိုပြီး ညစ်ပတ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်ချက်အရ လယ်သာကာဗာတပ်ဆင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုံးတွေက သာမန် ပလပ်စတစ်ကာဗာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေထက် ၆ ဆ ပိုပြီး ရောဂါပိုးမွှားများ တွေ့ရှိရကြောင်း အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ရုံးဝန်ထမ်းများကို စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ ၅ ဦးမှာ ၂ ဦးက ဖုန်းကို အိမ်သာထဲထိ ယူသွားပြီး အသုံးပြုကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင်များက အိမ်သာထိုင်ခွက်ကို အနုကြည့်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ကရိယာနဲ့ စကန်(scan)ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားတဲ့ အကွက်ပေါင်း ၂၂၀ ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး စမတ်ဖုန်းမှာတော့ အကွက်ပေါင်း ၁၄၇၅ ကွက် စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Aberdeen တက္ကသိုလ်မှ ဘက်တီးရီးယားဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပရော်ဖက်ဆာ Hugh Pennington က “စမတ်ဖုန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကြတဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါလိုပါပဲ လူနဲ့အမြဲတစေ ထိစပ်နေတာကြောင့် ပိုးမွှားတွေအမြဲ ပေါက်ပွားနေတတ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ကိုယ့်ဆီကနေပဲ ပြန်ပြီးပေါက်ပွားလာတာကြောင့် ကိုယ်တိုင် ပြန်ကူးစက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါတယ် သို့သော် ဖုန်းတစ်လုံးထဲကို လက်ပြောင်းလက်လွှဲတွေနဲ့ ထိတွေ့ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ အပြန်အလှန် ကူးစက်နိုင်စေတယ်လို့ ပရော်ဖက်ဆာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခုနောက်ဆုံး တွေ့ရှိချက်အရ စမတ်ဖုန်း အလုံး ၅၀ ကို စကန်ဖတ်ကြည့်ခဲ့ရာ လယ်သာကာဗာတပ်ဆင်တဲ့ ဖုန်းတွေက အိမ်သာကြွေထိုင်ခွက်ထက် ဘက်တီးရီးယား တွေ့ရှိချက်က ၁၇ ဆ ပိုမိုများပြီး ပလပ်စတစ်ကဗာတပ်ဖုန်းတွေကတော့ ၇ ဆ ပိုများကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
လူ ၂၀၀၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ အိမ်သာထဲ ဖုန်းသုံးသူ ၄၀% ရှိပြီး သူတို့ထဲက ၂၀% ကသာ အိမ်သာထဲက ပြန်ထွက်လာရင် ဖုန်းကို သန့်ရှင်းရေး ပြန်လုပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။